Inter Milan oo ka jawaab celisay dalabka Man United ay kaga dooneyso badelka Pogba iyo Tominay – Gool FM
Inter Milan oo ka jawaab celisay dalabka Man United ay kaga dooneyso badelka Pogba iyo Tominay
(Inter) 23 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ayaa ka jawaab celisay dalab ay dhigeeda Manchester United ka soo gudbisay Matias Vecino.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa xalka Man United ee qadka dhexe u arka Matias Vecino maadama Paul Pogba uu la maqan yahay dhaawac ka soo gaaray jilibka iyo Scott Mc Tominay oo la dhibaatoonaya dhaawac canqowga ah.
Shabakada “Sky Sports Italia” ayaa shaaca ka qaaday in Red Devils dalab amaah ah ay ku dooneyso ciyaarayahanka kooxda Inter Milan.
Hadaba, Inter Milan ayaa gabi ahaanba soo laashay ama diiday dalabka Red Devils ee ku aadan Matias Vecino.
Red Devils ayaa xiriir wanaagsan oo suuqa la leh Inter Milan, Bishan Janaayo ayuu ku biiray Ashley Young, halka suuqii xagaagana ay ku biireen Lukaku iyo Alexis Sanchez oo heshiiskiisu uu amaah yahay.
Matias Vecino ayaa dhaliyay 10 gool, 88 kulan oo Inter uu ka soo muuqday tan iyo bishii July ee 2017, ee uu €24million kaga soo biiray kooxda Fiorentina.
28 sano jirkan ayaa 41 kulan u saftay xulkiisa qaranka ee Uruguay.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Wolverhampton Iyo Liverpool ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay